IPhotoShrinkr -iMac App yokuKwenza iiFoto zoPhezulu | Plum emangalisayo
PhotoShrinkr-Mac usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Asanda: 5 / 20 / 19
Iyafuna: IMac 10.8-11.4
IfotoShrinkr-iMac App inyusa iiFoto zoMgangatho oPhezulu kweyona Ncinci incinci
I-PhotoShrinkr yenza ukuba unyanzelo lwefomathi ye-.jpg lungasebenzi ngendlela kunye ne-Photoshop. Ilungile kwiifoto ezinamawakawaka emifanekiso. I-PhotoShrinkr ikhawuleza ngokungummangaliso, igcina indawo kwaye igcina ixesha. Khuphela usetyenziso ukuyizama mahala. I-PhotoShrinkr inika ukusetyenziswa kwasimahla kwezi-5 ngosuku.
Ummangaliso ngokufanelekileyo umfoti ukuze abe naye kumphini wezixhobo. -Andy H.
I-PhotoShrinkr sisicelo sokuncipha ngokumangalisayo ubungakanani beefoto ngelixa kugcinwe eyona nto intle ibonakalayo. I-PhotoShrinkr yenza ukuba unyanzelo lwefomathi ye-.jpg lungasebenzi ngendlela kunye ne-Photoshop. Nciphisa ubungakanani beefoto kwaye ugcine umgangatho wokubonwayo. Khuphela usetyenziso ukuyizama mahala. I-PhotoShrinkr inika ukusetyenziswa kwasimahla kwezi-5 ngosuku.
"Y."Ukucinezelwa kwethu kusondele kakhulu kumlingo weefayile zeJPG eziphuma kwiNikon yam. ” -UMark S.
Sisebenze iinyanga sicamngca ngeenkcukacha ze-jpg, kwaye zenza ii-algorithms zokunciphisa ubungakanani obukhulu ngelixa sigcina umgangatho obonakalayo uphezulu.
Ukuba unewebhusayithi kwaye ufuna ukukhawulezisa isantya sokukhuphela iphepha kule-app ayisi-brainer. - UJoel K.
Ilungile kwiifoto ezinamashumi okanye amakhulu amawaka emifanekiso.
Ilungile kubaphathi bewebhu abafuna ukuba iisayithi zabo zilayishe ngokukhawuleza. Ukunciphisa ubungakanani bomfanekiso kunciphisa ixesha lomthwalo wesiza. Ukuhamba kwexesha ngokukhawuleza kuthetha abasebenzisi abaninzi ngakumbi nabonwabileyo. Iyaphungula umthwalo kwiseva kunye nenani leebhayithi ezihanjiswa.
Ilungele abaqulunqi abadla ngokuthumela amakhulu emifanekiso eqingqiweyo yomsebenzisi kwiinkcazo kunye nemanuwali.
Ilungile kwiinkampani ezifuna ukwandisa ukusebenza kunye nokunciphisa iindleko.
IfotoShrinkr ikhawuleza kakhulu, igcina indawo kwaye igcina ixesha. Iifayile .png kwaye unokuguqula iifoto zibe .ifomathi kakhulu.
Ujongano lubonisa ngokucacileyo umgangatho kunye noxinzelelo, ngaphambi (koqobo) nasemva koko (ucinezelwe ngePhotoShrinkr). Thelekisa ubuchule be-PhotoShrinkr kunye nokujongana nomsebenzisi kwezinye iindlela kunye nezinye iiapps ngokwakho.
Apha ngezantsi kuthelekiswa ifayile ye-6 ye-Meg ye-PNG eyayingama-288 K isinciphiso sama-96% kubukhulu bezo skrini.
Iifayile zokwenyani zibonisiwe. Zama ukurhuqa isilayida ukuze ubone ukuba uyawubona umahluko kumgangatho obonakalayo phakathi kwangaphambili nasemva.
Khuphela mahala, zama kwiifoto zakho, jpg kunye nepng's kwaye ubone ukuba inokukufeza ntoni. Thelekisa into osele uyisebenzisa ukunciphisa iifoto kunye nezikrini.
-ngezelelwa sisaziso. into entsha yokhuselo lweapile.
-khethelwe ukonga ukugcina, ukuguqula kunye nokuvula umhla.
- Uhlengahlengiso lwangaphakathi.
-Izihlaziyo kunye nokuphuculwa kwendlela
-inguqu ezininzi kwi-UI
-Iincoko ezithile zitshintshiwe
-ukongeza ukungafihli kunye nobungakanani 'bokwenza nge-watoshka yefotoshrinkr
-Ukuguqula ukuguqula heif
-khangelwe ukongeza kuhlaziyo
-ongezwa iifayile ze-zip
- Isantya esenziwe ngcono
-ngaphambi / emva kokuthelekisa okuthethwe ngcono
- nayiphi na ifoto eyongeziweyo ikhethwe ngokuzenzekelayo kwi-ui
-Ukuphucuka okuninzi kwi-ui
-Ngokuhlaziywa ukubonakaliswa kwesandla sasekunene xa kugqitywe ukwenziwa into yokugqibela.
-Lungisa umgca kwifonti malunga nebhokisi.
-Lungisa ibug xa usongeza into entsha ngelixa uyicubungula ngexesha elithile.
-Bonisa isalathiso senkqubela xa ukhetha into entsha ngelixa uvelisa imbonakalo
-Cima ukukhethwa ngokuzenzekelayo xa usongeza izinto ukuphucula ukusebenza
-Kwenziwe ezinye izinto ezintle ngakumbi.
-ususa umyalezo othile ngaphandle kokuba iDebug yenziwe ukuba isebenze.
-Isilumkiso esisigxina malunga nokuBumba ngokuQinisekileyo: isilumkiso, ucimiano olususiweyo kunye ne-CATransaction engavunyelwanga
-itshintshelwe kwikhowudi yexesha ukusebenzisa i-100th yesisombululo sec.
-ikhuselwe ngoku umfanekiso we-src ukuba ubungakanani bomfanekiso ophucukileyo mkhulu
-Guqula utshintsho lomfanekiso ukuze ulayishe ngasemva ukuze i-UI isebenze ngakumbi. Khupha:
Khuphela umfanekiso we-src xa umncinci
-ingasusi idatha ye-meta okanye iprofayile yombala.
-Vala ukukhutshwa kokuqala.
Imanywali inokufumaneka kwakhona kwimenyu yoNcedo okanye? ii-icons kuyo yonke iapp.
Nge-28 ka-Epreli ngo-2020 kwiMacUpdate.com
Ndingumfoti ongathandabuzekiyo. I-Nikon DSLR D7500 yam yesiqhelo yenza iifayile zeefomathi zeJPG ezili-15 nangaphezulu. Xa ndifuna ukucinezela ifoto ndiza kusebenzisa enye yabahleli bam bezithombe kwaye ndigcine kwakhona ifayile ngaphandle kotshintsho lomfanekiso. Ndingasindisa ngokulula isiqingatha sobo bukhulu. Ndifumene isoftware yePlum emangalisayo ngelixa ndikhangela enye into ngaphandle kwesoftware yefoto. Ndivavanye kwaye ekugqibeleni ndathenga iapps zabo. Ndisebenza kwialbhamu yeefoto ezikwi-intanethi ezazineefoto ezininzi. Ngokwenyani imifanekiso yamatye entloko kumangcwaba aseKentucky njengenxalenye yento endiyibize ngokuba yi "The Cemetery Trail" njengoko iphefumlelwe ngu "The Bourbon Trail" apha e-KY. Ndididekile sisantya sokukhuphela ukujonga iifayile ezinobungakanani obugcweleyo kwaye ndacinga ukuba ndiza kuzama iPhotoShrinkr kwiPlamu emangalisayo. Ndikhuphele idemo ndayiqhuba kwisampulu yefoto. Ubungakanani boqobo babungaphezulu kwe-13 megs. Xa ndiyicinezele ubungakanani ngoku yayingu-2.2 megs. Yayincinci kakhulu kangangokuba yayisothukile. Ndizamile ezinye ezimbalwa ngeziphumo ezifanayo. Inqaku elinye elipholileyo lenkqubo sisilayidi esibonisa ngaphambili / emva komfanekiso kwaye ungayilayida ngapha nangapha ukubona naluphi na utshintsho kumgangatho. Kuvavanyo lwam ndibone umahluko omncinci kakhulu. Ukulayisha kwi-albhamu yeefoto ezikwi-Intanethi kusebenza kakuhle. Ukuba ndiza kuba nefoto yam enye eprintwe kwifomathi enkulu ndingasebenzisa ifayile yoqobo. Eli nqanaba loxinzelelo lisondele kakhulu kumlingo weefayile zeJPG eziphuma kwiNikon yam. Emva kweefoto zovavanyo ezimbalwa ndathenga usetyenziso. Ndide ndatshintsha ii-imeyile ezimbalwa zenkxaso kunye nonjiniyela malunga neminye imibuzo kwaye ndafumana impendulo ekhawulezileyo. Ngamanye amaxesha ubaleka kumqambi wesoftware oyiqondayo indlela yokwakha isoftware enkulu. IPlum emangalisayo yenye yezo nkampani. Kucetyiswa kakhulu ukuba ufuna ucinezelo lweJPG.